Mpempe akwụkwọ Ederede Nke Akwụkwọ Na-eme Ka Ndị Nweta Maka Ihe Gburugburu Ebe Obibi | Haishu
Nsonaazụ nke nyocha ọhụrụ nke Europe na-ekpughe na akwụkwọ ndị a na-ede akwụkwọ ka akwadoro ka ọ ka mma maka gburugburu ebe obibi, ebe ndị na-azụ ahịa na-amata nhọrọ nke nchịkọta ha.
Nnyocha nke ndị ahịa Europe 5,900, nke mgbasa ozi ụlọ ọrụ abụọ Sides na ụlọ ọrụ nyocha onwe ha Toluna duziri, chọrọ ịghọta ihe ndị ahịa chọrọ, nghọta na echiche banyere nkwakọ ngwaahịa.
A gwara ndị zara aza ka ha họrọ ebe nkwakọ ngwaahịa kachasị amasị ha (mpempe akwụkwọ / kaadiboodu, iko, metal, na plastik) dabere na njirimara 15 gburugburu, arụmọrụ, na anya.
N'ime atụmatụ 10 agwa akwụkwọ / kaadiboodu ka masịrị maka, 63% ndị na-azụ ihe na-ahọrọ ya maka ịdị mma maka gburugburu, 57% n'ihi na ọ dị mfe imegharịgharị na ebe 72% na-ahọrọ akwụkwọ / kaadiboodu n'ihi na ọ bụ ebe obibi.
Mkpoko glass bụ nhọrọ kachasị amasị ndị na-eri maka inye ngwaahịa dị mma (51%) yana ịmegharịgharị (55%) na 41% na-ahọrọ elele na mmetụta nke iko.
Omume ndị ahịa banyere nkwakọ ngwaahịa plastik doro anya, ebe 70% nke ndị zaghachirinụ na-ekwupụta na ha na-agbasi mbọ ike iji belata ojiji a na-eji paịlị. A na-ahụkwa ihe eji emechi plastik n'ụzọ ziri ezi ka ọ bụrụ ihe arụgharị arụgharị kacha nta, ebe ndị ahịa 63% kwenyere na ha nwere ọnụego ihe mkpogharị na-erughị 40% (42% na-eji ngwaahịa plastic na Europe 1).
Nnyocha ahụ chọpụtara na ndị na-azụ ahịa na Europe niile dị njikere ịgbanwe omume ha iji zụọ ahịa na-adịgide adịgide. 44% dị njikere itinyekwu ego na ngwaahịa ma ọ bụrụ na ejiri ya na ihe ndị nwere ike ịchekwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara (48%) ga-atụle izere onye na-ere ahịa ma ọ bụrụ na ha kwenyere na onye na-ere ahịa anaghị eme nke ọma iji belata ojiji nke nkwakọ ngwaahịa na-anaghị emezigharị.
Jonathan gara n'ihu, “Ndị na - azụ ahịa na - amatawanye maka nhọrọ nkwakọ ngwaahịa maka ihe ha zụrụ, nke n'aka nke ya na - etinye nrụgide na azụmaahịa - tumadi na mkpọsa. Omenala nke'mee, jiri, tụfuo' ji nwayọọ nwayọọ na-agbanwe."